Suuraan: Kabaja guyyaa Ekeraa Meksiikoo - BBC News Afaan Oromoo
Suuraan: Kabaja guyyaa Ekeraa Meksiikoo
2 Sadaasa 2018
Namoonni uffata buqqee mataa uffatan ulee qabatanii
Guyyaan ekeraa magaala Meeksikootti kabajame. Agarsiisni kuni sanbata darbe galgala guyyaa namoota du'anii kabajuuf sagantaa qophaa'erratti. Sagantaan akkanaa kuni magaala Meeksikoo keessatti si'a sadaffaaf kan qophaa'eedha.
Namootni sagantaa kana qopheessan akka jedhanitti, kabajni guyyaa ekeraa kun tuuristoota hawwachuufis akka gargaaaru abdatu.
Bulchiinsi magaalichaa guyyaan ekeraa baranaa kun yaadannoo baqattoota giddugaleessa Ameerikaa irraa kara Karavaan osoo imalanii lubbuun isaanii darbeef akka oolu taasise.
Dubartoonni akka billaachaatti uffatan yeroo ayyaanicharratti ragadan
Meeksikootti sagantaan 'Dia de Muertos' yeroo hunda gaafa Sadaasa 2 kan kabajamu yoo ta'u, maatiin namoota kanneeniis namootni du'an sagantaa kanarratti hafuuraan gara dacheetti deebi'anii akka isaan waliin walqunnamanitti amanu.
Baandiin yeroo ayyanicharratti agarsisan
Namoota buqqee mataa gurguddoo halluun faayame uffatanii
Biyya kanatti sagantaan namoota du'aniif qophaa'u kuni bifa garagaraa kan qabu yoo ta'umaatii tokkorraa kan biraattios garaagarummaa qaba. Matiin tokko tokko namoota jaalatan kan lubbuun hin jirre kanneenif nyaata filatoo tahanii fi jaalatan qopheessuunis kabajuufi.
Namoota uffate lafee uffatan yeroo dhiichisanitti
Dubartii lafee uffatte faayaamte
Guyyaa ekeraa meeksikootti kabajame kanarratti ekeraan Catrina jedhamtuu laffgeewan ishee sirnaan uwwifamun bareedina sagantichaa irrattio dinqisiifannaa argatteerti.
Guyyaa kana namootni hedduun bakkichatti argamuun kan daawwatan yoo tahu televizhiniidhaanis tamsaasa argateera.
Dubartoota buqqee mataa uffatan
Namoota buqqee mataafi uffata faayame uffatan
Miidiyaaleen magaalattii akk agabasanitti sagantaa kana bareechuuf namootni tola ooltonni 1,200 haaluudhaa fi muuziqaadhaan bareedina sagantichaatif hirmaatani.
Guyyaan ekeraa kanaratti aadaa meeksikoo keessatti namootni haalan beekamoo turanii fi lubbuun hin jirre kanneen akka weellisaa Chavela Vargas fi weellisaa Frida Kahlos irratti yaadatamaniiru.
Sagantaan guyyaa ekeraa kabajuu kuni meeksikoo keessatti haalaan babal'achaa jira.warri lixa Meeksikoo magaala Guadalajaras haala adda taheen kabajan.
Suuraaleen hunduu mirgi abbummaa isaanii kan eegamedha.
Suuraawwan ajaa'ibsiisoo Afriikaa: Hagayya 24-30 , 2018
Afriikaa suuraadhaan: Muddee 30,2017 - Amajjii 4,2018
Viidiyoo, Suuraawwan halluu hedduu Guwaantanamoo ibsan
Suuraawwan torbee kanaa: Caamsaa 17 hanga 24, 2018
Wayita gammadnu maaliif sagalee baafnee iyyina?
Raawul Kaastiroo dursummaa Paartii Koministii Kuubaa gadhiisan